Expert Semalt: Ihe Ntuziaka Iji Zere Ịghọ aghụghọ Ntanetị
Ulo na imekota nke intaneti n'ime ahia na ndi mmadu na-ebi ndu di mmaihe ọjọọ. N'akụkụ dị mma bụ ọtụtụ uru internet na-enye dịka E-azụmahịa. Na na akụkụ ọjọọ bụ nchegbu n'ezie nchegbudị ka cybercrime.
Otu n'ime nchegbu kasị atụ ụjọ bụ ịghọ aghụghọ na ịntanetị. Ngwakọta Intanet na-eme mgbe ammadụ na-eji ịntanetị eme ihe na-ezighị ezi iji nweta aghụghọ na-ezighị ezi banyere onye ọzọ. Ọtụtụ mgbe, isi ihe kpatara yaỊghọ aghụghọ nke ịntanetị bụ uru ego - remote desktop linux vps basic.
E nwere ọtụtụ ụdị aghụghọ nke ịntanetị, ma ụfọdụ na-egbu ọtụtụ ugborokarịa ndị ọzọ.
Otu n'ime ọkachamara kacha ahụmahụ nke Ọkachamara ,Andrew Dyhan, na-akọwa ụdị aghụghọ ịntanetị ndị a:
1. Ihe Ntucha Na-adịchaghị Anya na Ịzụ ahịa Dị Oké Ọnụ Ahịa
Ndị na-akwado ndị na-ere ahịa adịgboroja lekwasịrị anya na ndị na-ere ahịa na-ere n'Ịntanet. Naomempụ ga-etinye ngwaahịa na saịtị na-ere ahịa na-egosi na ha na-ere ya na onye mbido kasị elu. Ngwaahịa ahụ nwere ike ịbụenweghị adị ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ dị, ọ dị iche na ihe a na-akpọsara. The scammer gbalịrị inweta bidder iji zipu ụgwọ zuru ezumaka ngwaahịa ahụ tupu ebufee ya. N'ikpeazụ, onye omempụ adịghị eziga ngwaahịa ahụ n'aka onye zụrụ (ihe a na-akpọ onye na-abụghị onye na-enyefe yanke ahia), ma ọ bụ ngwaahịa ahụ zitere bụ ihe ọzọ, mgbe ọ dị ọnụ ala karịa ọnụahịa nke akwụ ụgwọ-maka ngwaahịa.
2. Spams na Ịgba Ezu
Ndị ọkachamara na-eme ka ozi ịntanetị na-emejọ ndị ọrụ ịntanetị ma ọ bụemebi nsogbu ha na-eji. Ụfọdụ ozi ịgha ụgha na-achọ ịrata otu n'ime inyefe ozi gbasara onwe ha na nke ego,na ndị ọzọ na-aga n'ihu ịgakwuru ndị na-aghọgbu ndị mmadu n'iziga ego maka atụmatụ aghụghọ.
Ozi ịntanetị ndị a dị ize ndụ ga-abanye na igbe mbata gị dịka ọkwa maka enweghị mmasịmgbazinye ego, ndị ọrụ ebere na-achọ ego, mmeri dị elu, na nsogbu metụtara ndụ. Ha ga-enwe njikọ nke ị kwesiripịa iji nweta ihe ndị scammers na-ekwu na ha ga-enye. Naanị otu pịa na njikọ ahụ, ị ​​nwere ike igosipụta onwe gị n'ọtụtụ ihe egwu gụnyere ịnwekọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka nke nje virus na-ebute, na-ekpughere ndị ọbịbịa gị paswọọdụ, ozi kaadị akwụmụgwọ, nchedo mmekọrịta ọha mmadụ,adreesị na nọmba ekwentị.
A na-ejikarị spams na-ezu ohi n'ihi na ha nwere ike ịbụ, ma a na-ejikarị yanweta ozi nkeonwe nke a na-ejizi maka ọtụtụ ebumnuche gụnyere njigide..A pụrụ iji nkọwa nke onwe gị mee ihe ọzọụdị aghụghọ nke ịntanetị dị ka arịrịọ ma ọ bụ ahịa ụgha.
3. Ebe E Si Nweta Kaadị
Ebumnuche nke kaadị akwụmụgwọ na-ebutekarị ndị na-akpacharaghị anya mgbe ha jiri hakaadị akwụmụgwọ. Ndị ọzọ na-akụghasị site na nchịkọta na-eme ihe ntụgharị dị oke egwu.
Ụdị ụdị ịntanetị a na-amalite mgbe onye na-enyefe ntinye kaadị akwụmụgwọ na aebe nrụọrụ weebụ doro anya. Ndị omempụ ahụ ga-eji ozi a mee ma ọ bụrụ na ị na-enyefe ego ma ọ bụ zụta site na iji kaadị akwụmụgwọ.
4. Egwuregwu Scams
Ebubo ugbo ala na-agbasa site na nkwekorita ego ndi ozona-akpaghasị ndị investors ma ọ bụ na-ezu ohi ha. Ntuchi ahụ na-abịa n'ụdị mbadamba akwụkwọ ntanetị, akwụkwọ akụkọ maka ego, ma ọ bụụdị ihe ọmụma ndị ọzọ nke na-enye ihe ọmụma ụgha. Mgbe ọnụ ọgụgụ nke ndị na-etinye ego na-ada maka ojoro, ụkpụrụ ahịana-agbanwe ma onye omekome ahụ erere aka ya site n'ọkwá dị mma.
Ụdị ọnyà ndị ọzọ nke ịntanetị gụnyere ebe nrụọrụ weebụ na-enweghị ntụkwasị obi na nkwụsị ahịa ego.
weebụsaịtị ndị a na-enweghị ike ịtụkwasị obi nwere ike igosi saịtị ndị dị mma ma mee ka ndị ọbịa banyeazụmahịa na mmekọrịta dị ka a ga-asị na ha bụ ezigbo ihe. Ọgba aghara na-aga n'ihu na-aba ụba n'ọhụụ azụmahịa taa. Ị nwere ike ịmataụdị ọka a dị mfe. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-ekwusi ike inwe ego n'ihu ma na-ekwe nkwa ịlaghachi ego ahụ, ihe a na-eme bụ nke ukwuuO yikarịrị ka ị ga-abụ ojoro. Ngwadogwu na-aga n'ihu na-adị nnọọ mfe na ntanetị n'ịntanetị, karịsịa.
Ọ dị onye ọ bụla mkpa ịdị na-emelite mgbe nile n'otú scammers si aga n'ihu na ịntanetịmpụ n'oge ọ bụla. Nke a bụ aro ole na ole:
Gbaa mbọ hụ na saịtị ọ bụla ị chọrọ iji mee ihe bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi ma zere ndị ọkaibe ọhụrụ
Iji nkwụnye ihe eji echekwa ma chekwaa.
Adịghị pịa njikọ a zitere site na email tupu ikwenye na isi iyi nkeEmail ahụ bụ ihe a pụrụ ịtụkwasị obi.
Ekwela ka kaadị akwụmụgwọ gị ga - eji ya mee ihe
Were nlezianya mgbe ị na - eme nnukwu azụmahịa ma ọ bụ na - azaghachi n'ikike nyere online.
Lelee ego gị mgbe niile iji hụ na ihe niile dị mma.
KWESỊRỊ nọmba nọmba ntinye kaadị akwụmụgwọ gị ọ bụla.
Ka kpochapụ kaadị ahụ ma ọ bụrụ na ị ghotara ya.
Lelee anya mgbe niile ka ị hụ na ebe nrụọrụ weebụ ịchọrọ iji onwe gị naData data na nwere URL malite na https: //.